Bayern munich oo kusoo biirtay loolanka Antoine Griezmann | Ciyaarside.com
Bayern munich oo kusoo biirtay loolanka Antoine Griezmann
Kooxda Bayern Munich ayaa lagu soo waramayaa inay iska indha tirayso tartanka loogu jiro saxiixa weeraryahanka Atletico Madrid Antoine Griezmann xagaaga soo aadan.
Wargeyska Marca ayaa qorya in in tartanka ay ugu hireyso Manchester United, kuwaasoo si aad ah loola xiriirinayay xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska intii lagu jiray suuqa kala iibsiga, waxaana la fahamsan yahay inay xiiso weyn u qabto ciyaaryahanka.
Griezmann ayaa ku soo bilaaban doona bisha Janaayo suuqa kala iibsiga ka dib markii lagu soo rogay ganaax lacageed oo qandaraaskiisa uu dhacayo sannadkan, laakiin waxaa la filayaa inuu xiiso u qabto xagaaga soo aadan.
Si kastaba ha ahaatee, Bayern Munich ayaa u muuqata inay ka soo baxday tartanka loogu jiro saxiixa 26 jirkaan ka dib markii ay ku calaamadiyeen lacagta ku lug leh “murugo”. “Xitaa lama xaajoonin Griezmann,” agaasimaha isboortiga kooxda Hasan Salihamidzic ayaa u sheegay Sky in Germany. “Ma jiri doono inaan ku biirno murugada – miisaaniyada ku lugta leh ma ahan wax qiimo ah, hadii wax laga yaabo inay Bayern u fiican tahay, waan sameyn doonaa.” Barcelona, ​​Real Madrid iyo Paris Saint-Germain ayaa sidoo kale la fahamsan yahay inay isha ku hayaan xaalada.